1. Nanomboka nalaza ny fanaingoana trano tsotsotra, taorian’ny namoahan’i Niki Brantmark, “blogueuse” ny fomba fiaina avy any Suède. Izay zavatra tsotra no omen-danja, ny loko malefaka no ampiasaina mba hampitony ary arahina labozia fotsy izany.
2. Tsy mbola miova kosa ny lazan’ny loko mena, maitso sy fotsy rehefa noely. Ireo rahateo no tena mamehy sy miavaka ao anatin’ny fankalazana.
3. Manome endrika mihaja sy manaitra na “classe” ny ranom-bolamena. Ampidirina any anatin’ireo haingo apetraka amin’ny hazonoely na eny amin’ny rindrina izany ka misafidy loko iray amin’ny mena, na ny ranom-bolafotsy na ny maitso ho ampiarahina aminy.